Ny Huawei P20 Pro dia hanampy loko vaovao roa amin'ny elanelam-potoana ao amin'ny IFA 2018 | Androidsis
Eder Ferreño | | Huawei, IFA, Finday
Ny Huawei P20 Pro no mety ho telefaona lehibe indrindra ao anatin'ny katalaogan'ny mpanamboatra sinoa. Modely iray izay revolisiona teo amin'ny tsena, ary izany dia manana fivarotana tsara. Ny iray amin'ireo lakilen'ny fahombiazany dia ny loko misy azy, indrindra ny tonony Twilight, miaraka amin'iny vokatr'afo iny, izay mampifangaro loko maro miaraka.
Fantatry ny marika sinoa fa tian'ny mpanjifa ireo loko ireo. Noho izany, manambara izy ireo fa amin'ity IFA 2018 ity dia hahafahantsika mahafantatra kinova vaovao roa an'ny Huawei P20 Pro. Araka izany, mikatsaka ny hampiroborobo ny varotra avo lenta izy ireo amin'ny faran'ny taona.
Ireo loko vaovao roa ireo dia hanaraka ny tsipika ny tonon'ny Twilight izay natolotra tamin'ny fiandohan'ny taona. Noho izany dia hampifangaro alokaloka maro samihafa amin'ny endrika mitovy izy ireo. Alokaloka roa samy hafa, samy manana aingam-panahy. Ka hisy zavatra ho an'ny rehetra.
Iray amin'ireo kinova amin'ity Huawei P20 Pro ity hampifangaro loko toy ny manga, mainty, volomparasy na turquoise. Izy io dia kinova izay mampanantena hisarika ny saina betsaka noho ny fifangaroany loko isan-karazany. Ankoatry ny fanaovana ny avo lenta ho hafa noho ny maodely hafa eny an-tsena dia misaotra azy.
Tsy io ihany no kinova amin'ity Huawei P20 Pro izay hihaonantsika amin'ny IFA 2018. Misy kinova hafa amin'ny feo maivana miandry antsika, zavatra malina kokoa noho ilay teo aloha. Raha izany dia hampifangaro feo mavo, fotsy ary mavokely. Noho izany dia zavatra milamina kokoa sy tsy miandany izy io.
Amin'ny hetsika malaza any Berlin amin'ny faran'ity volana ity no ahafantarantsika ireo kinova roa farany ireo. Tsy nisy voalaza momba ny vidiny, na dia antenaina fa hanana ny vidiny mitovy amin'ny kinova hafa avo lenta aza. Manantena izahay fa hahalala bebe kokoa ao anatin'ny andro vitsivitsy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Huawei » Ny Huawei P20 Pro dia hampiditra loko vaovao roa ao amin'ny IFA 2018
Ny Huawei Nova 3 sy Kalau dia hamidy amin'ny loko Iris Purple any India manomboka amin'ny herinandro ho avy
Ny Huawei Mate 20 Lite dia hampiasa Kirin 710 ho toy ny processeur